Madaxweynaha Puntland oo Maanta Shacabka Eyl kula hadlay goob fagaare ah, – SBC
Madaxweynaha Puntland oo Maanta Shacabka Eyl kula hadlay goob fagaare ah,
Madaxweynaha Puntland Dr Cabdi Raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo wafdi balaaran oo uu horkacayo islamarkaana ay ka mid yihiin qaar ka mid ah golahiisa wasiirada ayaa maalintii labaad booqasho ku jooga Degmada Eyl ee gobolka Nugaal.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa safarka ay ku joogaan gudaha degmada Eyl waaa mid shaqo oo kormeer ah waxaana halkaasi uu madaxweynuhu kula kulamay odayaasha, Waxgaradka iyo weliba Shacabweynaha deegaankaas.
Maanta madaxweynuhu waxa uu Qudbad u jeediyay dadweyne farabadan oo isugu yimid goob fagaare ah isagoona taabtay arimo badan oo ay ka mid tahay Siyaasada Puntland.
Madaxweyne Faroole ayaa ka sheekeeyay marxaladaha kala duwan ee xukuumadiisu soo martay iyo kuwa ay iminka damacsantahay in ay ku talaabsato, waxaana uu halkaasi ka qiray in xaalado waaweyn oo ay dhaqaalayari ka mid tahay ay jirto balse ay dowladiisu ku rajo weyntahay in ay shaqyso.
Waxaa kale uu madaxweynu taagtay arimo badan oo Nabadgeliyada iyo horumarka quseera, waxaana ka mid ahaa in dowladiisu iminka ku talaabsatay howl aanay isku dayin iskadaa qabashadeedee xukuumadihii ka horeeyay taasi oo ah ka bixista nidaamkii qabaailka islaamrkaana u gudbida heerka dimuqraadiyada ama furashada xisbiyada.
Waxa uu madaxweyne Faroole sheegay in loo baahanyahay in dalka ay hor kacaan dad dhalinyaro ah islamarkaana ninkii doonaya in uu noqdo maamulka dalka in uu furto xisbi kaas oo uu ku gaarayo heerka maamuleed ee dalka.
“Anagu waxba dooni meyno cidna xoriyada kama qaadin, waxaan idiin sheegaynaa cidii dooneysa in ay u tartanto Madaxnimada Puntland Albaabku waa u furanyaahy, waa in ay sameysataa xisbi “ayaa ka mid ahaa hadalada Madaxweynaha uu u jeedinayay Shacabkii isugu soo baxay Eyl.
Sikastab ha ahaatee Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole ayaa noqoneysa markii ugu horeysay oo uu Booqsho ku tago degmada Eyl tan iy intii loo doortay xilka madaxweyne nimo .